Payment For Myanmar Visa
Restrictions for Mogok Entry Lifted Up
Myanmar Visa သည် Paypal ၏ Verified Premier Member ဖြစ်ပြီး 2003 ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာပြည်အတွင်းမှ စသုံးခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများ ဗဟုသုတရရန် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်းနှင့်အဖြေများကို Facebook တွင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါရန်။ Please Click Here for Latest Update.
ပြည်တွင်းမှာ ဘဏ်ကတ်နဲ့ ပေးလ်ပဲလ်ချိတ်လို့ရလာတာကြောင့် အွန်လိုင်းငွေချေမှုအဆင်ပြေလာ
အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုဖြစ်တဲ့ payment စနစ်မှာ နိုင်ငံတကာလိုအသုံးပြုလို့ ရလာပြီဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ကုန်တွေကို နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာ အဆင်ပြေလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းရှိ နည်းပညာရှင်အချို့က သုံးသပ်ကြပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေချေမှုက Paypal လို Payment Service မျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အပြင်က ဘဏ်တွေအထိ တကူးတကငွေချေးယူတာတွေ၊ ငွေလွှဲပေးတာတွေကို လုပ်စရာမလိုဘဲ နိုင်ငံခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် အကောင့်ရှိရုံ နဲ့ငွေချေးယူတာတွေ၊ ငွေလွှဲတာ တွေလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သည်လိုအွန်လိုင်းငွေချေမှုစနစ် လွယ်ကူလာတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်သူ တွေအနေနဲ့ ဘဏ်အထိသွားစရာမလိုတော့ဘဲကတ်နဲ့ပဲ ငွေသွင်းငွေလွှဲတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ KBZ ဘဏ်နဲ့ paypal နဲ့ ချိတ်လို့ရလာပြီ၊ အွန်လိုင်းမှာငွေချေလို့အဆင်ပြေလာပြီ၊ ဆာဗာတွေဝယ်လို့ရ သွားပြီ၊ paypal သုံးလို့ရရင် တော်တော်များများပွင့်သွားပြီ၊ ဗီဇာကတ်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပြီလို့ အိုင်တီ နည်းပညာရှင် ကိုရန်နိုင်မြင့်က ပြောပါတယ်။ Payment Gateway အဆင်ပြေလာတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ Education Content (အွန်လိုင်း ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ အာမခံငွေသွင်းတဲ့စနစ်တွေ (Premium Service)ဝယ် ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် Payment Gate-way တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကို အမေရိကန်က (US Sanction)ကြောင့် အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိအစိုးရ သစ်လက်ထက်မှာ မိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဝယ်လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆန်ရှင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အဓိကကျတဲ့အချက်ကတော့ paypal ရှိရင် နိုင်ငံတကွာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကနေ ကမ္ဘာကျော် အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေဇုန် (Amazon)မှာတောင် အကောင့်ဖွင့်ပြီး paypal နဲ့ တိုက်ရိုက်ငွေချေ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မာစတာကတ်ရှိတာနဲ့တင် အွန်လိုင်းငွေချေမှုစနစ်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းရှိ developer တွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်နိုင်ငံခြားက developer တွေ သင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ ဝယ်ကြည့်နိုင်ပြီး E-book လိုစာအုပ်တွေလည်း ဝယ်ဖတ်လို့ရနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ပညာရေးပိုင်း သင်တန်းတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်သင်ကြားလို့ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက မာစတာကတ်တွေကို အွန်လိုင်းမှာလက်ခံလာကြပြီ၊ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်ဘဏ်က ကတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသွားပြီလို့ အိုင်တီနည်းပညာရှင် ကိုထက်ဝေယံစိုးက ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှုအနေ အထားစစ်တမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် ၁၃၉ မှာဖြစ်နေတာကြောင့် နည်းပညာနဲ့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးချဖို့ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
To pay for Myanmar Visa services, you can use PayPal. You can securely pay via PayPal's page and you will receiveaconfirmation email from Myanmar Visa as well as PayPal.
Pay with peace of mind, we protect your eligible purchases. If you want to stop the visa process in the middle or we did not deliver according to our promises, Paypal and we can help you get your money back.
Millions of customers around the world use Paypal for one simple reason: it’s simple. Just an email address and password will get you through to checkout before you can reach for your wallet.
Want to file for refund? Get your return shipping costs refunded. If you purchase something with us and it’s not quite right, we can refund your return shipping costs*.
Question : Can I use Paypal in Myanmar?
Answer : Yes, you can use it with such service provider as MPT, Telenor, Ooredoo. Some IP might be blocked by paypal.
Question : How can i verify my Paypal account in Myanmar?
Answer : You have to use the country as Singapore andaSingapore address. If you need help call 780 204020 or email info@myanmarvisa.com
Question : Can I get the money from Paypal in Myanmar?
Answer : Yes, you have to contact the agents who specialize in gotting money from Paypal to Myanmar. Please see below :
Question : I want to pay Online Shopping/ eBay/ Alibaba/ Games/ Software/ Apps/ Gift Cards which accept Paypal. How can I do thet?
Answer : Yes, There are agents who can pay Online Shopping/ eBay/ Alibaba/ Games/ Software/ Apps/ Gift Cards with Paypal or any international credit cards or even bank transfers. Please see below :
Question : PayPal Account ဖွင့်ဖို့ နိုင်ငံရွေးတဲ့နေရာမှာ Myanmar မပါတော့ နိုင်ငံကို ဘာရွေးလို့ရမလဲ?
Answer : Singapore ကိုရွေးပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက Singapore ဖုန်း၊ လိပ်စာ၊ Bank Verification တွေစီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်။
Question : Online Shopping မှာသုံးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ PayPal နဲ့ ငွေလက်ခံလို့ရပြီလား?
Answer : ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ PayPal နဲ့ ငွေလက်ခံတာကို အာမခံနဲ့ တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးပါတယ်။
PayPal Personal Account ပြုလုပ်နည်း
PayPal အကောင့် ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
1. Email Account တစ်ခု
2. CB Bank မှ Master or Visa Card (လက်ရှိ စမ်းသပ်ထားသလောက် CB Bank မှ Card များဖြင့်သာ အဆင်ပြေပါသည်။)
၁။ https://www.paypal.com/sg/webapps/mpp/home သို့ သွားရောက်ပါ။ (နိုင်ငံရွေးရာတွင် Myanmar မပါသည့် အတွက် Singapore နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖွင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။) အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ “Sign up now” buttom အား နှိပ်ပါ။
၂။ PayPal အကောင့်စတင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် “Buy with Paypal” အောက်ရှိ “Get Started” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၃။ နိုင်ငံတွင် Singapore ကိုရွေးပြီး First Name, Last Name, Email Address, Create Password တို့ကို ဖြည့်ပါ။ အားလုံးဖြည့်ပြီးလျင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ ဤအဆင့်တွင် PayPal အကောင့်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်း ရပါမည်။ အချက်အလက်များအား မဖြည့်သွင်းမီ Singapore Address တစ်ခုနှင့် Singapore ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုအား ကြိုတင်ရှာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းပြီးလျင် Agree ဖြစ်ကြောင်း (√ ) လုပ်၍ Agree and Create Account ကို ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၅။ နောက်အဆင့်မှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ မိမိ Visa/ Master Card နှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက Linkacard to start using your PayPal account ကိုနှိပ်နိုင်ပြီး Go Shopping အောက်မှ Get Started ကို နှိပ်ရင်လည်း Card Information တောင်းပါလိမ့်မည်။
၆။ မိမိ Card Information များအား ဖြည့်လိုက ဖြည့်နိုင်ပြီး မဖြည့်လိုပါက I’ll do it later ကိုနှိပ်ပါ။
၇။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရလျင် မိမိ PayPal Account ဖွင့်ခဲ့သော Email ထဲသို့ “Complete your PayPal account setup” ဆိုသည့် mail တစ်စောင် ရောက်ပါလိမ့်မည်။ အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးပြည့်စုံရန် Email အတည်ပြုပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ Email ထဲသို့ အောက်ပါအတိုင်း “Complete your PayPal account setup” ဆိုသည့် mail ရောက်လာလျင် Email confirm လုပ်ရန်အတွက် “Yes, this is my mail” ဆိုသည့် စာကို click လုပ်ပါ။
၉။ PayPal Login Page ပေါ်လာလျင် PayPal Account ဖွင့်ခဲ့စဉ်ကပေးခဲ့သော password ကိုဖြည့်၍ Confirm Email Address ကိုနှိပ်ပါ။
၁၀။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရလျင် PayPal Personal Account တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သင့် Paypal Account ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Copyright © မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအထွေထွေစီးပွားရေးသမ၀ါယမအသင်းလီမိတက်
Please check our Facebook.
we are responding 24/7
Send mail to Visa Site Administrator
Tel : +9598623435, +959896147575<
Last Modified : 13 Feb 2015 | nhn